Sideen Kuheli Karnaa Aayodhiinta (iodine)? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Aayodhiinta inta badan waxaa laga helaa cunnooyinka aan cunno caadi ahaan, gaar ahaan cunnooyinka cusbada leh, qudaarta iyo cunnooyinka laga helo badda. Waxaa jiro xilliyo uu jirkeenu ubbaahanyahay aayodhiin, waana marka ey jirkeena kuyaraato aayodhiinta, waxaana yareeyo cudurro laxiriiro qanjirka soo saaro aayodhiinta ee looyaqaan (thyroid gland).
Aayodhiintu waxa ey leedahay xaddi loogu talagalay qiyaas ahaan 15–20 mg, 80% oo kamid ahna waxaalaga soo daayaa qanjirka thyroid-ka.
Calaamadaha Lagu Garto Yaraanshaha Aayodhiinta jirka?
Dhuunta oo soo buurato.
2. Miisaanka oo sidhaqso ah u siyaada.
3. Tabar darri iyo daal.
4. Garaaca wadnaha oo isbedala ama qal-qal uu kudhaco.
5. Caado wareer ku dhaco Dumarka kujira xilliga dhalmada.
6. Qofka oo maqaarkiisa qallayl uu noqdo.
Cunnooyinka Ugu Badan ee Laga Helo Aayodhiinta:-
Qudaarta cagaaran:- guud ahaan qudaarta waxaa laga helaa macdanta nuucyadeeda kala duwan, waxa eyna muhiim utahay caafimaadka jirkaaga.
2. Malaayga nuucyadiisa kala duwan (Cod,Tuna IWM): malaayga intiisabadan waa hilib jilicsan oo aan kubadnayn baruurta, 60% ayaa Malaayga laga helaa macdanta aayodhiinta.
3. Cusbada aayodhayska ah: waa nooc cusbo ah oo shiidan lagana sameeyay aayodhiinta.
4. Ukunta: ukunta qeybta jaallaha ah waa ilaha ugu fiican ee aayodhiinta laga helo, haddii uu isticmaalo qofka ey kuyartahay aayodhiinta waxa ey u noqaneysaa mid waxtar leh. 16% oo ah macdanta aayodhiinta ayaa laga helaa ukunta qeybteeda jaallaha ah.
5. Caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo sida: caanaha nuucyadooda kala duwan, farmaajada iyo Subagga.
6. Looska iyo sisinta: waxa ey qeyb muhiim ah kaqaataan kor uqaadista aayodhiinta jirka.
Tags: Sideen kuheli karnaa aayodhiinta( iodine)
Next post Waa Maxay Nasiibku? Waa weyddiin iyo fal-celinteedi.!
Previous post Adigu Sidee Ayaad Bulshada u Saameyn Kartaa?